Noocyada kala geddisan ee suuqa ku yaal, kee baa la dooranayaa? | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomàs Bigordà | | Kaydinta tamarta, Dhaqaalaha Guriga, Deegaanka
Maqaalkani waxaan ku sharxi doonaa kuwa kala duwan noocyada nalalka, kuwaas oo badanaa looga isticmaalo guryaha ama xafiisyada, faa iidooyinkooda iyo khasaarahooda.
1 Dhinacyada la tixgelinayo kahor ogaanshaha noocyada nalalka:
2 Waa maxay Lumens? Iyo sida loo xisaabiyo
4 Noocyada nalalka iyo talooyinka lagu dooranayo
4.1 Nalalka ugu wanaagsan ee Led
4.2 Nalalka ugu fiican Eco halogen.
4.3 Nalalka dabka dhaliya.
4.4 Nalalka ugu fiican ee Fluocompact.
5 Maxay yihiin astaamaha laga fiirsado?
Dhinacyada la tixgelinayo kahor ogaanshaha noocyada nalalka:
1. Karti, kuwaas oo watt (w) ah oo ay wada cuneen nuucyada kala duwan ee nalka.
2. Nolosha waxtarka leh, taas oo loola jeedo waqtiga nooc kasta oo guluubyada ahi ay dambeeyaan.
3. Midabka, Maaddaama nalka uu soo deynayaa uu noqon doono jaalle ama cadaan iyadoo ku xiran hadba kala doorashada noocyada guluubyada kala duwan. Tani waxay ku xirnaan doontaa tiknoolajiyada aad doorbideyso, maadaama ay noqon karto LED, eco halogen ama fluocompact.
4. Wareegyada Waxay sidoo kale yihiin dhinacyo kale oo la tixgelinayo marka la kala dooranayo dhammaan noocyada nalalka jira, maaddaama guluub kasta uu dejiyey inta jeer ee qiyaas ahaan la rogrogi karo ama la demin karo.
Waxyaabaha kale ee maskaxda lagu hayo waa taas Nalalka keydinta tamarta waxaan ku tiro koobi doonnaa sidaada dhalaalka, iyada oo loo marayo halbeegga qiyaasta ee loo yaqaan "lumensThelumens”Taas oo kaliya muujineysa xaddiga iftiinka soo baxa.
Taabadalkeed, tan kore nalalka dabka dhaliya ayaa lagu cabiray watts (W), oo tilmaamaya inta koronto cuno.
Waa maxay Lumens? Iyo sida loo xisaabiyo
Su’aasha ugu horeysa ee aan isweydiineyno ayaa ah inaan isweydiino muxuu yahay Lumen?
Lumens waa unugga Nidaamka Caalamiga ee Cabbiraadaha si loo cabbiro qulqulka iftiinka, cabirka awoodda iftiinka ee ka soo baxa isha, xaaladdan guluubka nalka. Guluub kasta oo hogaamiya wuxuu badanaa dhaliyaa inta u dhaxeysa 60 iyo 90 lumens, marka waan xisaabin karnaa taas hal guluubka 15W bixin lahaa a soosaarka iftiinka ee qiyaastii 1050 lumens. Muxuu noqon karaa wax ka yar ama ka yar iftiinka uu 65W guluubka dhaliya dhaliya.
Isbarbar dhiggan waa natiijada qaaciddada soo socota: Xaqiiqda Lumens = Tirada Watts x 70.
Dhammaan wixii la sharaxay ka dib, waxaan arki karnaa tusaale wax ku ool ah oo ka koobnaan doona ogaanshaha Immisa nalalka badbaadiya tamarta ah ayaa loo baahan yahay meel cayiman, oo noqon karta qol kasta oo guriga ka mid ah.
Taasi waxay ka dhigan tahay, haddii qol lagu shido nal 400 lumen, bedka qolku waa 20 mitir laba jibbaaran, heerka iftiimintu wuxuu noqon doonaa 20 lx.
Qolka jikada: talo soo jeedinta nalka guud wuxuu u dhexeeyaa 200 ilaa 300 lx, in kastoo aagga shaqada gaarka ah (halka cuntada lagu jaro laguna diyaariyo) wuxuu gaarayaa 500 lx.
Noocyada nalalka iyo talooyinka lagu dooranayo
Nalalka ugu wanaagsan ee Led
Iyaga ayaa loo soo gaabiyey Nuurka Emitting Diode. Ku nalalka hogaaminaya Iyagu waa kuwa ugu habboon ee la jaanqaadi kara deegaanka, maaddaama ay metelaan ikhtiyaari bey'adeed iyo sidoo kale hufnaan.
Tani waa sababta oo ah iyagu kama sii daayaan deegaanka inta kale CO2 noocyada nalalka, iyo sidoo kale ha soo bandhigin tungsten ama meerkuri.
Sidoo kale haddii aan falanqeyno muuqaalada ugu muhiimsan kor ka faallooday, nolosha noocyada kala duwan ee nalalka, nalalka LED-ka waxaa loo isticmaali karaa ilaa konton kun oo saacadood. Kaydinta xagga isticmaalka way ka badan tahay tan muhiimka ah, maadaama aan wax ka cabi doonno qiyaastii 80% in ka yar guluub kale oo dhaqan u ah.
Nalalka ugu fiican Eco halogen.
Iftiinka noocan ah nalalka noocan ahi waa kuwo dabiici ah oo isla markiiba shidan. Marka laga hadlayo nolosheeda waxtarka leh, badiyaa waa laba kun oo saacadood, oo baqshad ku cunaya saddex meelood hal meel marka loo eego kuwa hurayaasha ah, ee aan hoos ku faalloon doonno.
Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo luminta tamarta sababtoo ah saameynta kuleylka, tan iyo nooca nalalka ah waxay soo saaraan kuleyl.
Nalalka dabka dhaliya.
Isticmaalka tamarta ayaa ah kan ugu sarreeya dhammaan nalalka, oo aan gadaal ka arki doonno biilka korontada.
Nasiib wanaagse, laga bilaabo 2009 wixii ka dambeeyay, way soo saarneyd ka bixitaanka nallada nuucaan ah ee suuqa, Jidka siinta xalka ugu fiican ee bixiya isla natiijada xagga dhalaalka, laakiin leh adeegsi aad u hooseeya. Isla mar ahaantaana ay leedahay tiro badan oo wareegyo ah, iyagu ma soo saaraan kuleylka oo ma soo saaraan midab sax ah
Nalalka ugu fiican ee Fluocompact.
Nalalka noocan ah waxaa loo yaqaan miyir beelid hooseysa; oo leh nolol waxtar leh oo u dhexeysa toddobo kun iyo toban kun oo saacadood, oo ay cunaan inta u dhexeysa 75 iyo 80% boqolkiiba wax ka yar nalalka caadiga ah.
Sida nalalka ay bixiso, kuwan noocyada nalalka badbaadiya tamarta Si aad ah looguma talinayo in loo isticmaalo aagagga safarka. Tan iyo inta badan waxay qaadataa dhowr ilbiriqsi ka hor inta aan la siinin dhammaan awoodda iftiinkaaga.
Maxay yihiin astaamaha laga fiirsado?
a) Waqtiga ay qaadaneyso guluubka nalka inuu gaaro waxqabadka ugu badan, taasi waa, sida ugu dhakhsaha badan ee ay u rogmato.
b) Xagasha furitaanka ama nalka iftiinka, oo macnaheedu yahay xagal hoose, iftiinka wuxuu diirada saari doonaa qodob cayiman.
c) Nolosha waxtarka leh ee guluubka, taasi waa, saacadaha in nalka guluubku socdo.
d) Marka laga eego dhinaca bilicsanaanta, waan xaadiri doonnaa foomamka. Waxaan ka heli karnaa adduunka, wareega, wareega ama nalalka shumaca.
e) Waxa kale oo jira qaabab kala duwan oo duurka ah iyadoo kuxiran dhexroorkeeda iyo nooca dunta taas ayaa leh.
f) Tirada jeer guluubka nalka waa la shidi karaa oo la dami karaa, taasi waa, wareegyadooda.
g) Awoodda iftiinka ama iftiinka, qaab sidan u tiro badan lumens waxaan heli doonaa qadar badan oo iftiin ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Noocyada kala geddisan ee guluubka ah, midkee ayaa la dooranayaa?
Switzerland waxay u codeyneysaa mashruuc lagu xirayo warshadeeda tamarta nukliyeerka
Sidee bay u shaqaysaa marawaxadaha dabaysha ama dabaysha dabaysha?